गणतन्त्रमा को–को भए प्रधानमन्त्री ? कसका कति मन्त्री ?
काठमाण्डौ । ११ वैशाख ०६३ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जनआन्दोलनमा सहभागी सात दल तथा १० वर्षे विद्रोह गरेको माओवादीसँग शान्तिसम्झौता भयो । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि माओवादी पनि सहभागी भएको कोइराला नेतृत्वकै सरकारले संविधानसभा निर्वाचन गरेको...
आन्दोलन भन्दै राजपा चुनावको तयारीमा
काठमाण्डौ । राजविराज – राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक वरिष्ठ नेता यति बेला आफ्नो गृहक्षेत्र सप्तरीको हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरलगायत विभिन्न पदमा आफूअनुकूलको प्रभावशाली प्यानल मिलाउन व्यस्त छन्। मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका एक सदस्यलाई उम्मेदवार बनाउन उनी दुई दिनअघि भारदहमा रातको समयमा घन्टौं सक्रिय रहेको...
मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा माओवादीभित्र भाँडभैलो
काठमाण्डौ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने बिषयलाई लिएर माओवादीभित्र भाँडभैलो सुरु भएको छ । विभिन्न गुटका नेताहरुले आफ्नालाई काखी च्याप्न थालेपछि कसलाई सरकारमा पठाउने र कसलाई रोक्ने भन्ने बिषयमा निर्णय लिन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई निकै सकस भएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । मंगलबार शेरबहादुर देउवा प्रध...
रेणु जिताउन यस्तो सम्म गरियो, कांग्रेसभित्र बबण्डर ! (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई जसरी पनि जिताउने रणनीतिअन्तरगत वडाका सबै उम्मेद्वार फिर्ता गर्ने पार्टीको निर्णयका कारण कांग्रेसभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ । यसअघि मेयर पदमा माओवादीलाई समर्थन गर्ने निर्णयका कारण समेत कांग्रेसभित्र ठूलै भाँडभैलो मच्चिएको थियो । कांग्रेसभित्रको तीव्र असन्तुष्टि मतदानको क्रममा समेत...
एउटै पदमा भीड्दै बाबुछोरा !
काठमाण्डौ । लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेका प्युठान नगरपालिका–९ मरन्ठानाका बाबुछोरा स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटै पदमा उम्मेदवार भएका छन् । सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रयास भए पनि सहमति नमिलेपछि दुवैको उम्मेदवारी घोषणा भएको हो । नगरपालिकाको ९ नम्बर वडाध्यक्ष पदमा बाबु भरतबहादुर केसी र जेठो छोरो बाचुन केसी उम्मेदवार बनेर चुनावी मैदानमा खडा...
काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) लाई सरकारसँग सहमति भएको पत्र पाउनासाथ चुनाव चिह्न प्रदान गर्न प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिएको छ ।राजपा शीर्ष नेतृत्वसँग आइतबार बहादुरभवनस्थित कार्यालयमै गरेको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचन चिह्न प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिएका हुन् । राजपाले चुनाव...
काठमाण्डौ । नेतृत्वबीच आन्तरिक विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री चुनाव र दल दर्ताबारे राष्ट्रिय जनता पार्टी आइतबार कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री चुनावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालदाई समर्थन गर्ने राजपाको तयारी रहे पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको विषय बीचमा आएपछि बैठक अनिर्णीत भएको हो । राजपा एक उच्च नेताले भने,...
देउवा सरकारमा राप्रपालाई ४ मन्त्रालय, उपप्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार
काठमाण्डौ । देउवाले सरकारमा सहभागी हुन राप्रपालाई शनिबार पठाएको पत्रमा चार मन्त्रालय दिने, तर उपप्रधानमन्त्री दिन नसक्ने उल्लेख रहेको नेताहरूले बताएका छन्। पत्र पठाएलगत्तै देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र नेता पशुपतिशमशेर राणालाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। तर, थापाले भेटेनन्। राणासँगको भेटमा देउवाले राप्रपाले चलाएका पुरानै...
राजपाले देउवालाई सघाउने !
काठमाण्डौ । आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने सङ्केत गरेको छ। सिंहदरबारस्थित काँग्रेसको संसदीय दलमा राजपा नेपालसँग सभापति देउवाले गरेको छलफलमा त्यस्तो सङ्केत गरेको हो। आफ्नो नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकार पुरानै गठबन्धनको निरन्तरता भएकाले सरकार...
पौडेलको प्रस्तावमा देउवा बोलेनन्
काठमाण्डौ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ठूलो छाती बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक उम्मेदवारी तय गर्न शनिबार बिहान बसेको पार्टी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पौडेलले भने, ‘सिंगो कांग्रेसको नेता र सभापति बन्ने कि नबन्ने ? सुधार तपाईं (देउवा) बाट हुनुपर्छ ।’ उनले...
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध महाअभियोग दर्ताको गृहकार्य !
काठमाण्डौ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने गृहकार्य थालेको छ । भरतपुरको वडानम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने यादव नेतृत्वको टिमको निर्णयबाट रुष्ट एमालेले आयोगको छविलाई कांग्रेस र माओवादीको इशारामा लागेर धुमिल बनाएको र गरिमा समेत घटाएको निश्कर्ष निकाल्दै एमालेले महाअभियोगको...
निर्वाचन आयोगभित्र भाँडभैलो, एमाले अदालत जाने
काठमाण्डौ । भरतपुर महानगरपालिकाको वडानम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णयका कारण निर्वाचन आयोगभित्रै भाँडभैलो मच्चिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पेलेर पुनः मतदान गर्ने निर्णय गराएको भन्दै आयुक्त नरेन्द्र दाहालले गम्भीर असहमति जनाएपछि भाँडभैलो मच्चिएको हो । आयुक्त दाहालको असहमति छरपस्ट भएसँगै आयोग निर्णय...
भरतपुर १९ को सबै मत अबैध घोषित, पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णय
काठमाण्डौ । भरतपुरमा माओवादी कांग्रेसको रणनीति सफल भएको छ । एमालेले जित्ने अवस्था भएपछि पुनः मतदान गराउने योजनाका साथ २ माओवादी कार्यकर्ता परिचालन गरेर वडानम्बर १९ को मतपत्र च्यातिएको थियो । सो बिषयमा लामो समयसम्म अनिर्णित बनेको निर्वाचन आयोगले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भरतपुरका १९ नम्बर वडाको सबै मत अबैध घोषित गरी पुनः मतदान...
अग्राख पलाएन, देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित
काठमाण्डौ । एमाले र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको खेललाई पन्छाउँदै अन्ततः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित देखिएको छ । उनले व्यवस्थापिका संसदले प्रकाशन गरेको कार्यसूचि अनुसार समयमै प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । सो क्रममा उनलाई प्राप्त समर्थनले समेत उनको सरकारको पक्षमा...
राजपा अडान उसकै लागि घातक, धमाधम पार्टी छाड्दै केन्द्रीय नेता
काठमाण्डौ । पार्टी गठन भएको डेढ महिना नपुग्दै राजपा नेपालका केन्द्रीय नेताहरुले पार्टी छाड्न थालेका छन् । पार्टी नेतृत्व निर्वाचनमा जाने या नजानेबारे अलमलमा देखिएपछि चुनाव पक्षधर नेताहरु अन्य पार्टीमा जान थालेका हुन् । राजपा छाडेका अधिकांश नेताहरु उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । केही नेताहरु भने फोरम...